कसरी भयो बीमाको सुरुवात ? यस्तो छ विकासक्रम
बैंकिङ खबर । बीमाको प्रचलनको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा ई.पू. ३ हजार वर्ष अघिको बेबोलोनिया र सुमरमा पुग्नु पर्नेहुन्छ । यी दुवै स्थान अहिलेको इराकमा पर्दछन् । त्यसबेला यी दुई राज्यका व्यापारीहरुले जहाजमा हुने चोरी, डकैती तथा अन्य क्षतिबाट बच्नका लागि …